ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551, ọ bụ egwuregwu na ọ bụ ego [Nlebaanya] | Akụkọ Ngwa
Miguel Hernandez | 10/11/2021 10:00 | General, Nyocha
Ọ bụghị mgbe niile ka anyị na-enwe ohere iji nyochaa ma lelee ngwaọrụ ndị na-akụda ala. Oge a ọ ga-echetara gị na-apụghị izere ezere na Asus Zenbook Pro Duo ngwaọrụ anyị tụlekwara ebe a na Gadget News na nke Zephyrus Duo na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ozugbo na usoro nke imewe, ma dị ka mgbe niile, na-emegharị na Republic of Gamers ọha.
Anyị na-ele anya nke ọma na ASUS ROG Zephyrus Duo ọhụrụ, laptọọpụ egwuregwu nwere ihu abụọ nwere ngwa asịrị, ọ na-anapụta ihe ọ na-ekwe nkwa? Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe anyị chọrọ inyocha na laptọọpụ a nke a na-enye dị ka ihe pụrụ iche na nke pụrụ iche na ahịa.
1 Ụdị pụrụ iche na enweghị atụ
3 Njikọta n'ụba
4 Otu ezigbo panel na ezigbo ahụmịhe mgbasa ozi
Ụdị pụrụ iche na enweghị atụ
Ihe mbụ dọtara uche anyị bụ imewe ya, ọ bụ ezie na anyị achọpụtala ihe ezi uche dị na ya, dịka anyị kwurula, ya na nwanne ya nwoke na ụdị ndị ahịa nke Zenbook Duo, o nwere àgwà nke ya. N'ezie ma e jiri ya tụnyere ụdị nke gara aga, ọ dịghị mgbanwe dị ukwuu, agbanyeghị, mkpuchi azụ nwere micro-perforations kpochapụwo nke ngwaahịa Republic of Gamers. na ahịrị ike ya, na ngalaba a, ihe owuwu ahụ na-enye mmetụta siri ike na nke kachasị mma, ASUS bụ onye nrụpụta ọkachamara mgbe niile na akụkụ ndị a na ngwaahịa a agaghị adị obere.
Akụkụ: X x 360 268 20,9 mm
Ibu ibu: 2,48 kilogram
Ọ bụghị oke oke ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ihe niile mejupụtara ya, agbanyeghị, ọ nwere ọkwa njikọ zuru oke. A na-ebuli ihuenyo "okpukpu abụọ" gaa n'ọnọdụ dị mma ma ọ bụrụhaala na anyị na-eji ngwaọrụ ahụ, ihe m chere na ọ dị mkpa. Ịchọ ịmata ihe bụkwa ebe "trackpad" dijitalụ dị n'akụkụ aka nri aka nri, nke a na-amanye na nke a site na mbelata ohere maka keyboard, nke n'aka nke ya nwere njem zuru ezu na RGB LED ọkụ na-atụ anya.
Na ọkwa processor nke a ASUS ROG Zephyrus Duo Ọ na-amalite site na ihe nrụpụta AMD, kpọmkwem Ryzen 9 na ụdị 5900HX ya na arụmọrụ egwuregwu dị iche, na-achụ àjà okpomọkụ. Ọ na-esonyere ya na 32 GB nke DDR4 RAM na 3200 Mhz na n'ikpeazụ, maka nchekwa ọ dịghị ihe na-erughị abụọ 0TB NVMe RAID 1 ebe nchekwa steeti siri ike, o doro anya na na ngwaọrụ a enweghị ngwaike echekwara na enwere ike ịsị na ASUS ROG tụfuru. anụ niile dị na grill, ọ siri ike ịchọta ngwaọrụ ndị yiri ya.
GPU adịghị anya n'azụ, anyị nwere a NVIDIA GeForce RTX 3080 130W yana 16GB nke ebe nchekwa GDDR6, Otu n'ime kaadị eserese kachasị elu na ahịa, nke ewepụtara na mbido 2021 na ụdị pụrụ iche maka laptọọpụ, anyị nwere ike ịsị na ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma dị na ahịa. Banyere ọsọ nke nhazi data, NVMe SSD okpukpu abụọ ya na RAID 0 gafere ọsọ mbufe 7 GB / s (obere ihe karịrị ọkara na ederede). N'ọkwa teknụzụ, anyị na-eche otu n'ime kọmpụta laptop kachasị dị ike ma dị ike nke anyị nwere ike ịhụ n'ahịa, yana nke ahụ. Ọ nwere ọnụ ahịa, ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ ya ị nwere ike ịzụta ya na Amazon na onyinye kacha mma.
Anyị na-amalite, dị ka mgbe niile, na ọdụ ụgbọ mmiri anụ ahụ. Anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri n'azụ iji nweta nkasi obi HDMI 2.0b ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbakwunye nyocha nke abụọ, yana ọdụ ụgbọ mmiri RJ45 LAN na leek USB-A 3.1. Anyị nwekwara ọdụ ụgbọ mmiri n'akụkụ USB-C 3.1 DP + PD, tinyere ọdụ ụgbọ mmiri abụọ ọzọ USB-A 3.1, ihe ntinye ọnụ na ihe nrụpụta audio jikọtara ọnụ na ihe nkwụnye ọkụ nke na nke a bụ kpọmkwem maka laptọọpụ a. N'ezie, ọdụ ụgbọ USB-C ịbụ Nnyefe Ike ga-enyekwa anyị ume ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ya.
N'ọkwa nke njikọta ikuku, Zephyrus Duo ahọrọla maka ụdị kachasị ọhụrụ na ihe niile, anyị nwere WiFi 6 Wi-Fi 6 (Gig +) (802.11ax) 2 × 2 RangeBoost na Bluetooth Bluetooth, Ọ bụ ezie na anyị na-akwado mgbe niile igwu egwu site na eriri na DMZ Host maka IP kọmputa, nke bụ eziokwu bụ na maka egwuregwu ndị ọzọ na-abụghị FPS ọgbọ nke isii WiFi na-ekwe nkwa latencies n'okpuru 5ms na kwụsiri ike 600/600 njikọ dị ka anyị onwe anyị ule. N'akụkụ a, anyị ahụbeghị nsogbu teknụzụ, n'ezie ahụmịhe ahụ adịla mma nke ukwuu.
Otu ezigbo panel na ezigbo ahụmịhe mgbasa ozi
Anyị ga-amalite na ihuenyo nke 15,6 sentimita asatọ na 4K mkpebi nke ọ na-eji IPS LCD panel edozi nke ọma na usoro nke agba, na-enweghị nkwụsị ọkụ na mkpuchi dị mma iji zere ntụgharị uche na-achọghị. Ọ nwere ume ọhụrụ nke 120 Hz nke ahụ na-eme ka obi ụtọ anyị na-egwu egwu, ee, ọ nweghị kamera weebụ ihe siri ike nghọta na laptọọpụ dị ka nke a, gịnị kpatara ASUS?
Mkpọpụta LAG: kacha 3ms
Ihe njide Stylus
Maka nke ya ScreenPad Plus bụ 14,1 inch na doro anya na ọ bụ tactile, anyị nwere ike ịrụ ọrụ na ya, dee ndetu ma ọ bụ jiri ya dị ka ndọtị nke desktọọpụ. Ọ nwere 3840 pikselụ kwụ n'ahịrị ma nwee usoro ebuli akpaka mgbe ị na-ebuli mkpuchi nke laptọọpụ na-eme ka ikuku ikuku dịkwuo mma.
Maka akụkụ ya, o nwere igwe okwu 4W abụọ nwere Smart Amp na 2 2W tweeters, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime laptọọpụ kachasị mma mgbe ọ na-abịa ụda, nke abụọ na MacBooks Apple. Ọ nwere nkwado maka Dolby Atmos ọdịyo yana teknụzụ mmụba nwere ọgụgụ isi.
Mmekọrịta Aura maka ọkụ RGB
Banyere nnwere onwe, anyị nwere usoro nke 4-cell Li-ion (90 WHrs, 4S1P) na ọ bụ ezie na ọ ga-ezuru ihe karịrị awa atọ ma ọ bụ anọ nke akpaaka ụlọ ọrụ, ule anyị na-eme mgbe anyị na-egwu egwu ga-adabere na arụmọrụ a na-ajụ. Ọ baghị uru ibibi nke ukwuu na akụkụ a dịka a na-atụ aro ka igwu egwu n'ịntanetị.
O doro anya na laptọọpụ a bụ nzọ dị mma ma dị mfe, mana maka nke ahụ ị ghaghị gafere igbe ahụ, ihe karịrị euro 2.900 ọ na-efu na ire ere ha bara uru gram ọ bụla nke laptọọpụ a nke yiri ka ọ dị mfe dị ka iwere ihe kacha mma nke ụlọ ọ bụla ma tinye ya na chassis mara mma ma dị mma.
Ihe na: November 10 nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: November 2 nke 2021
Nhazi dị egwu na nke a na-ahụ anya
Nnukwu njikọ anụ ahụ na ikuku
Ngwaike kachasị n'ụzọ ọ bụla
Enweghị igwefoto weebụ
Enweghị ike ịgbasa modul RAM
Ọnụahịa ahụ nwere ike igbochi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551, ọ bụ egwuregwu na ọ bụ ego efu [Analysis]
Soundcore Liberty 3 Pro bụ nhọrọ ọhụrụ nwere ANC na nkọwa dị elu